Boqol gobanimo ku dhinta ayaa ka Roon Gunnimo « CEELBARDAALENEWS.COM
« Bulso Weynta Reer Awdal Maxay ka sugayaan Riyaale? Waxbaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.
BISHAARO……BISHAARO ….. BISHAARO..ALNUUR.COM KU SOO DHAWAADA. »
Boqol gobanimo ku dhinta ayaa ka Roon Gunnimo
Ceelbardaalenews-Dilla-Dhulkii uu xoreeyey halgamaagi waynaa ee Axmed Gurey ayuu maanta Dahir Rayale si xarago leh ku bixiyey, isaga oo Maxad-Case ku Xumaynaya.
Qarannimo ama gobanimo waxay la macno tahay marka bulsho ayna uga daba fadhiisan bulsho kale, noloshooda ama sharaftooda guud iyo tan gaar ahaaneedba.
Mar hadii aanay bulshadaasi ka baqaynin wax naftooda, dhulkooda, khayraadkooda, xoolahooda, aanu jirin habayaatee wax khatar galin kara ama looga cabsado xaquuqdooda. Ha ahaado wadankale oo duullimaad milatari kusoo qaada ama maamul xumo kaga timaada gumaysi dhexdooda ah oo ka dhaca wadankiisa dhexdiisa habayaraatee hadii aay bulshadaasi ka xoryihiin dhamaan khatarahaasi kala duwani waxaan odhan karnaa bulshadaasi waxay haystaan xornimo taam ah FREEDOM.
Laakiin hadii ay bulshadaasi marka ay galbeed eegaan cabsiyi gasho hadana bari eegaan kasii daran waqooyi ay eegaan waxba ka qaban kari waayaan koonfur eegaan hadalkeedba daa. Dhamaana ay ku noqoto aduunku cidhiidhi ama ay u arkaan in ay noloshoodu ku jirto khatar waxaa kasoo dhex baxa bulshadaasi rag xoreeya oo dhiig ku faraxasha sidii loo badbaadin laha bulshadaasi leh Rag,Dumar,Caruur,ee looga hor tagi laha khatartaasi kusoo fool leh.
Ragaasi kasoo dhexbaxaa wax baqdin ah mayaqaanaan oo naftooda ayey u hibeeyaan bulshadoodu si ay ugu noolaadaan mustaqbalka dheer iyo kan dhawba XORIYAD. Waxay noqdaan hormoodka qaada hubka lagala hortagayo cadawga kusoo fool leh ama cadawgan ka dhextoosayba . Geesigaasi badbaadinaya bulshadiisa waxa uu kala dhexgalaa qiiqa baaruuda iyo gumuca rasaasta ayaa U noqda wehelkiisa koowaad umana aabo yeelo dhibaato kasta oo cirka isku shareerta. Magaciisuna waa HERO islamarka uu Xaqiijiyo hadafkiisa ee uu ka guulaysto cadawgiisana waxa uu ku yeeshaa bulshadiisa magac iyo maamuus gaar ah ilaa abidkii waxaa loogu yeedhaa halyey.
Hadii aan usoo noqdo dulucda aan qaatay qalinka waa bulshada gobolka Awdal oo maanta khatar ku jirta Juqraafi ahaan dhaqaale ahaan dhulkoodii oo la boobayo dhinac kasta Hadii aad eegto Hargeisa xaqeenii iyo cadkeenii kama hayno hadii aan eegno xaga Adisa Ababa indhahaa kusoo baxaya Djabouti kasii daran hadaba marka uu xaal halkaa marayo bulshadeeniina ay maanta sidaa u dayacantahaymaxaa inala gudboon?
Aduunka dhamaan waxa maanta ka taagan ee laysku dilayaa waa taakooyin dhul ah oo Strateejiya Zeiylac iyo Sacad-diina waaba dhulkii taariikhiga ahaa ee Halyeygeenii weynaa ee Axmed Gurey ee ku hagoogtay dhiiga aan ka dhaxalay mida kale dhulkan maanta Dahir Rayale bixiyey. Hadii ay u gaysay in uu u hibeeyo Ismail Omer Guelleh damiir Xumadiisa waa in ay dhamaan beesha Makaahiil siiba Jibriil Yoonis dhiig iyo xinjiroba u qubaan sidii loosoo celin lahaa. Zeiylacna looga tirtiri laha wax siyaasiyiin reer Djabouti ah oo soo faragaliya.
Mida kale reer baadiyaha Ciisena hadii ay wanaag ku dhex deganaan waayaana baadiyaha waa in buulasha lagu gubaa xoolahoodana la xaraashaa hadayse reer baadiyuhu soo faragalinwaayaan qadiyada Zeiylac waa in la dhafaa. waayo degaan maaha laakiin waa daaqsin waa hadii ay ku qancaan daaqsintaasiye. Dhulkii uu xoreeyey halgamaagi waynaa ee Axmed Gurey ayuu maanta Dahir Rayale si xarago leh ku bixiyey isaga oo Maxad-Case ku Xumaynaya. Hadaba hadii aynay beesha Makaahiil ama Jibriil Yoonis arintaasi ku taageersanayn ama aanay ku dhiirigalin Dahir waa in ay Maxad-Case xaalsiiyaan oo ay dhulkoodii uu Dahir oo Jibriil Younis kasoo Jeedaa bixiyey waa in ay dhulkoodii u xoreeyaan oo ay halgan u galaan naf iyo maalba u huraan kadibna ay Maxad-Case gacanta ka galiyaan taasi ayuunbaana maanta noqonaysa xaalkii laga xaal marinlahaa Zeiylac iyo Sacad-diin beesha maxad-case ee degaankoodii uu Jibriil Younis u hibeeyey Reer Jabouti hadiise ay taasi dhici weydo waxaa hubaal inay arintaasi ku keeni karto Bulshada reer Awdal kala jab ku yimaad dhexdeena oo cadowgeena aan u nuglaano sidaana aan ku tafiirgo’no dhulkeenana ay dad kale ku baashaalaan bad iyo bariba.
Dhamaan inta jecel midnimada Gobolka Awdal iyo Samaroonba waxaa la gudboon maanta in ay u istaagaan midnimada gobolka aynay waxbana ka dhagaysan. Siyaasiyiinya fulayda ah iyo Salaadiin aanu hadalkoodu shaqayn ee aan rina gees ka ridayn. Waayo nin Suldaan kale ah oo kasoo jeeda beelaha kale ee JSL hadii uu shir jaraaid qabto oo yidhaa walee haday sidaa ama sidaa la yeeli waayo dhagahaa faraha lagalin doonaa isla markaaba xakuumada ama bulshada rayidka ahi way maqlaan hadalkooda oo waa la fuliyaa hadalkiisaa ama shirkiisaasi jaraid waxa kasoo baxa. Laakiin bilcakis hadii uu hadlo ama uu shir jaraaid qabto suldaan ka mid Salaadiinta Qoyan ee reer Awdal waxba lagamasoo qaado waayo waxaa la ogyahay in aanu waxba Samayn karin hadii uu hadlo iyo hadii uu shir jaraaid qabtoba wax isbadal ahna masamynaayo ama ficil gacan ka hadal ah maracinaayo,hadiiba la maqliwaayo hadalkiisaasi ama shirkiisaasi jaraaid.
Waxaanse kula talin lahaa dhamaan da’yarta ama dhalinyarta soo koreysa ee reer Awdal maanta wax idiin maqan oo la odhankaro waa hogaan run ah oo tawjiihaad inii samaynkaraa ha ahaado siyaasi ama Suldaan ma jiro. Hadaba waa in aad tashataan inta aanu haadku idinku dhicin ee aan dhulkiina la qaadan mana dhandhamayso noloshu wajikastaba ha yeelatee inta dhulkiina la haysto khayraadkiinana lagu taamayo. Hadii ay JSL waxka qaban waydana waxba wax dambi ahi inagama saarna waxii halkaa ka iman kara ee nabadgalyo xumo ama burbur ah baduna buurta hajiidho Cadanina Zeiylac ha jiidho waxba inooma yaalaan kuwa aan dhalaana waxay noqon doonaa in lagu bahdilo wadamada jaarka ee ay u doontaan shaqo ama ayka raadiyaan nolol tani dhaanta hadii aynaan kuwa aan dhalay iyo kuwa aan dhali doonanba u samayn bii’ad sharaf leh oo ay ku noolaadaan qayrkoodna kula tartamaan wax ay nolosha maantu inoo samaynaysaa ma jirto waxaana inoo dhaanta dhimashada waayo 100 qof oo ku dhinta hadaf ayaa ka fiican bulsho ku noolaata bilaa u jeedo.
Si kastaba ha ahaatee; maanta maanta kawaanka cadawga ayaa ina dulyaala hadii aan isku halayn lahayn madaxdeenii iyo salaadiinteeniina waad arkaysaan oo kuwii lagu qashay Dilla iyo Gabiley dhexdooda ayaan waxba lagasoo qaadin hadaldii saladiinta gobolku ka yidhaaheen saladiinteeniina waxay galeen hurdo dheer 7/11. Ku quus qaata in ay wax inoo qabtaan siyaasiyiin iyo salaadiin intuba waa cadawgeena hadii aanahay reer Awdal.
Walaalayaal tashada oo iskugu yimaada shir degdeg ah waliba waa in shirkaasi lagu qabto Yemen Sanca ama Adis Ababa oo lagu doorto hogaan xidhiidhiya dhamaan reer Awdal gudaha iyo dibadaba aanan la nimaadno. Isbadal run ah oo aan wax kaga qaban karno sidan aan nahay badalo dhamaan ujeedooyinkeena ku salaysan shaqsiga aanan ka fekero danta guud ee mustaqbalka bulshada.
Mahammed Abdirahman Sharif.
This entry was posted on November 14, 2009 at 5:03 pm	and is filed under 1. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.